Ma jiro AirPods Pro cusub illaa 2022 | Waxaan ka socdaa mac
In kasta oo jiilka labaad ee AirPods ay ficil ahaan diyaar u yihiin in la soo bandhigo inta lagu gudajiro sanadkan 2021, AirPods Pro waxay umuuqataa inay waqti dheer qaadan karto in la arko iftiinka. Falanqeeyaha caanka ah ee Apple Ming-Chi Kuo, Ayaa sharraxaad ka bixisay warbixinteedii ugu dambeysay in shirkadda Cupertino aysan soo bandhigi doonin moodooyinka cusub ee AirPods Pro illaa sanadka dambe
Dabcan wararka xanta ah ayaa aad ugu yaraa arrintan In kasta oo ay tahay xilli hore in la yiraahdo Apple ma haysto cusbooneysiin ku saabsan sameecadaha dhagaha la 'ee loo qorsheeyay sannadkan, haddana waxaa suurtagal ah inay ugu dambayn sidaas noqoto.
uu macnaheedu waa inUe waxay daabacday warbixinnadii falanqeeyahan caanka ah ee ku saabsan suurtagalnimada bilaabista AirPods Pro sanadka 2022. Waxay umuuqataa markaa sanadkaan inaan ka baxeyno jiilka labaad ee Pro laakiin haddii aan dooneyno inaan helno hubaal cusub nooca AirPods asalka ah, kiiskan waxaa jira hadal ku saabsan samaacadaha dhagaha leh naqshad la mid ah AirPods Pro.
Xaqiiqdu waxay tahay in sameecadaha dhagaha ee Apple ay arkayaan isbadal markii ugu dambeysay la bilaabay Beats Studio Buds (oo wali aan iib aheyn) iyo in ka badan jiilka labaad ee cusub ee AirPods. Falanqeeyaha ayaa sii sharaxaya taas Soosaaradan Apple waxay matalayaan isbeddelada habka dadka isticmaala Apple ay wax u iibsadaan iyo kuwa aan isticmaaleynin, laakiin macno ahaan waxaan hubnaa in danaha shirkada leh tufaaxa la qaniinay ay tahay in aalado badan oo suurtagal ah la iibsado.
Sida laga soo xigtay Kuo, shirkadda Cupertino waxay imaan doontaa rubuckan sanadka qiyaastii 5 milyan oo dhego-yare oo ka yar hoos u dhigista saadaasheeda hore ee ah 75 milyan oo unug ilaa 70 milyan. Jaantuska weli aad u sarreeya oo Bel ku haya meelaha ugu sarreeya ee iibka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Ma jiro AirPods Pro cusub illaa 2022
Apple waa macmiilka ugu weyn ee ka shaqeeya barta Google ee keydinta daruuraha